Fanatanjahan-tena ao anaty dobo
Ny fanatanjahan-tena ara-batana ao anaty rano dia lasa malaza be. Maro ny spaoro SPA izay manolotra vahaolana momba ny fitsaboana rehetra ao amin'ny dobo, satria ny fampiasana ara-pahasalamana ao anaty rano dia manana tombontsoa maro: ny rano mafana (28-32 ° C) dia mahatonga ny ligaments sy ny hozatra ho lasa elastika, mampihena ny enta-mavesatra eo amin'ny hazavana sy ny harato, dia miteraka fanafody ary manome ny hetsika tsy mendrika sy ny enta-mavesatra.
Mazava ho azy, raha mila fiantraikany ara-pahasalamana mafy ianao, dia tokony hanao fomban-jiro fotsiny ianao miaraka amin'ny mpampianatra amin'ny dobo filomanosana sy foibe manokana. Noho izany, raha oharina amin'ny osteochondrosis, na dia mandritra ny fanatanjahan-drano aza, ny fampihetseham-panadinana dia nesorina, ary amin'ny scoliosis, ny fampiharana ao amin'ny dobo dia voatendry ho an'ny tenany manokana, amin'ny fijerena ny habetsaky ny karazam-pandrefesana. Aza manadino ny torohevitry ny manam-pahaizana!
Hodinihintsika ny fampiharana maromaro ao anaty dobo filomanosana, ny fehikibony, ny kibony ary ny felam-pandrosoana amin'ny fanamafisana ny fandalinana tsy miankina.
Fanatanjahan-tena ao anaty rano ho an'ny rindran-damba sy ny fehikibo
Ny fanatanjahantena ao anaty dobo dia natao amin'ny toerana ambony, amin'ny halaliny eo amin'ny valan'ny tratra, miadana, amin'ny dingana mafana. Azonao atao izany ho toy ny hafanana alohan'ny hilomano na eo alohan'ny fibodoana voalohany. Amin'ny voalohany dia vonona ny hamerina indray ny fampihetseham-batana tsirairay amin'ny rano in-dimy, amin'ny hoavy dia afaka hampitombo ny isa hatramin'ny 10-15.
Asandratoo ny sandrinao, ampifanaraho eo ambany tratra. Miafina ny lean avy eo. Ahitsio ao amin'ny lalana samihafa. Apetraho eo an-damosinao ny tananao. Asandrato izy.
Atsangano ny sandrinao amin'ny sisiny, ampidiriny ao anaty elanelan'ireo horosidina izy ireo ary asio ilay borosy. Raiso ny tananao ao anaty rano, misotroa. Manaova fihodirana mivantana sy fihetsika boribory amin'ny tananao eo ambanin'ny rano fiaramanidina samihafa. Ohatra, atsangano ny haavon'ny tratrany ary ataovy ambany ny sandrinao amin'ny fiaramanidina aoriana. Na manangan-tanana iray, ary ny iray aoriana, dia manova ny toerany. Atsangano ny tananao amin'ny ambaratonga ao amin'ny tratranao. Mipetraha ary mampifanaraka azy ireo eo an-damosiny.
Fanatanjahantena ao anaty rano ho an'ny gazety sy ny homamiadana
Ny fanatanjahan-tena ao anaty rano ho an'ny kibo sy ny feny dia mora kokoa amin'ny fanaovana fanohanana amin'ny endrik'ilay dobo. Amin'izao fanohanana izao dia maoderina ihany koa ny mampiasa ny poti-jiro na fehin-koditra manokana. Ny Noodle dia saribakoly polyamide ety amin'ny elany izay mora hitazona ny lanjan'ny vatanao ary mamela anao hanao, ohatra, fanatanjahan-tena tsotra ho an'ny gazety ho "bisikileta" ao anaty rano havanana eo afovoan'ny dobo. Ho fanohanana, mbola ampiasaina ny tohatra sy ny rindrin'ilay dobo.
Manaova fihodinana sy fihodinan'ny boribory eo amin'ny tongotrao, amin'ny aoriana ary any aoriana. "Fitaovam-piadiana", "sira", manandratra ny tongotra mankany amin'ny tratra - ireo sy ireo fanatanjahan-tena tsotra hafa miaraka amin'ny fanatanjahan-tena tsy tapaka dia hanampy anao hahazo volo malefaka sy matevina ary elastic buttocks.
Fampianarana olon-dehibe milomano
Ahoana no hianaranao hilomano ho an'ny olon-dehibe?
Yoga ho an'ny mpandihy: fanazaran-tena
Vovon-trano vita amin'ny vato
Moa ve azo atao ny manao batisa zazakely tsy misy paradisa?
Ny rindrin'i Koch - ahoana no handresena bakteria mampidi-doza?
Ny fampakarana ny lavarangana miaraka amin'ny tanan'ny tanana
Arthrose amin'ny firaisana amin'ny soroka - soritr'aretina sy fitsaboana
Fiatoana amin'ny tovovavy
Karazana vehivavy manao ahoana no tian'ny lehilahy?
Ny endrika tsara indrindra ho an'ny tovovavy iray
Bozaka ho an'ny alika amin'ny satroka
Ny fomba fametrahana zavatra marina - torohevitra tsotra izay hanatsara ny fiainanao
Ny Printsy William dia nanandrana ny anjara asan'ny ... mpandidy iray oncologista!
Hairy ho an'ny volo tsara 2014
Dokam-barotra amin'ny visa ho an'i Boligaria
Ny fitsaboana ny tenda any an-trano amin'ny olon-dehibe
Ilay mpihira Rihanna dia nitafy ny fonon'ilay "Magazine Paper Magazine"
Kiraro mihaja sy kapa 2013
Kobay amboara ho an'ny ririnina